UGWUANYỊ ETINYELA ỌCHỊ N’IHU NDI ENUGWU NGWO – hoo!haa!!
UGWUANYỊ ETINYELA ỌCHỊ N’IHU NDI ENUGWU NGWO
Site na nrụgharị ahụ arụgharịrị ụzọ ochie ahụ bụ Ugwu Mịlịkịn, sitere Enugwu pụta ngwoo ma garue Naint Mail-Kọna, aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị etinyela ọchị n’ọnụ ndi steeti Enugwu.
Arụgharịrị ụzọ ahụ n’ụdị ọgbara ọhụrụ, tinye ya ọkụ okporo ụzọ n’ụmụ ihe nchekwa ndi ọzọ.
Ọbụghị naanị na ndi steeti Enugwu na-enwe ọñụ maka ọrụ ọma a onye ọchịchị bụ Ugwuanyị rụrụ ha, kama o mekwara ha nwee ezigbo ntụkwasị obi n’ọchịchị ya
Arụrụ ụzọ a na mbụ na agbata afọ otu puku na itolu nakwa otu puku na iri abụọ na asatọ. Ọbụ ndi ọchịchị ndi ọcha rụrụ ụzọ ahụ.
Yabụ ụzọ nke bụ sọ ugwu gbara ngọrigọ ma bụkwara nke agbarapụwororịị ọtụtụ afọ, bụzikwa ọkacha mma isi Ọnicha banye Enugwu ugbu a.
Ụzọ a nke si n’etiti ndagwurugwu gara ije ka agwọ gafee nwekwara ọtụtụ ọmaricha osisi dika nke nwa bekee kpọrọ pain ejiri chọọ ya mma. Ọbụghị naanị na osisi ndi a na-eme ka akụkụ Enugwu na-acha akwụkwọ ndụ, akwụkwọ ndụ mgbe niile, kama, ha na ihe ọma ndi ọzọ Chukwu jiri chọọ Enugwu mma mere ka yabụ obodo bụrụ ihe nkiri nye ndi na-eme njem nkiri.
Akụkọ kọrọ n’ọbụ mgbe ndi ọchịchị ndi ọcha agba ọchie siri Ọka na-agbago akụkụ ugwu ala anyị n’afọ otu puku na asatọ, ka ha lere anya hụchata yabụ ọmaricha ugwu Ngwoo. Ka ịdị mma ebe ahụ siri tọọ ha n’ụbụrụ mere ha ji chee ma kwere na aga-enwerịrị ihe ọma nke Chineke jiri chọọ okpuru ala ebe ahụ mma. Nke a mere ha bụ oke bi n’ụlọ jiri gwa nke bi n’ọfia na azụ dị na ngịga site na igwa ndi isi ha nọ na Legọs ihe anya ha hụrụ.
Na-egbughị oge ọbụla, ndi isi ahụ zitere ndi ọkacha mara n’ihe gbasara igwuputa akụ na ụba nke ime ala. Ebum n’obi ha bụ igwuputa ọla ọcha n’ebe ahụ. Mana mgbe ha malitere igwu ala ebe ahu, ha nwetara ola ojii bụ kool.
Ọbụzị maka ịgwu ọla ojii a ka ndi ọcha jiri bia biri n’ugwu ngwoo bụ ebe nke ejiri Hiltọpụ mara rue ụbọchị taa.
Ọbụ mgbe ahụ ka ha malitere rụba ụzọ ahụ nke akpọrọ aha ya tinyere n’aha onye seputere ka aga-esi rụọ yabụ ụzọ. Aha nwa amadị a bụ Mazị Mịlịkịn.
Ọbụ ime ka ọrụ ọma a ndi ọcha rụrụ maka ọdị mma nke ndi Enugwu nakwa ala anyị niile dịgide, ka aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị, na-agbanyeghị ka imi na anya dị akụ na ụba ala anyị jiri bagide irụzi okporo ụzọ a sitere ngwoo gafee ahịa ọhụrụ banye ime Enugwu. Ọ dị mkpa imata na ụzọ a bụ nke gọọmenti etiti ala anyị.
Ebe ejiri mee anya bịakwa lere n’ụzọ ahụ bụ, etiti ugwu ahụ bụ Ugwu Mịlịkịn bụ nke arụgharịrị n’ụdị ọgbara ọhụrụ, jiri mgbò aja nakwa ọkụ okporo ụzọ chọọ ya mma iji me ka njem bụrụ ndi si ebe ahụ aga ije awele.
Arụgharịghị ụzọ a naani maka iji ya cheta ma kọọ akụkọ mgbe ochie kama ọ gara n’ihu igosi ụdị ọchịchị bụ igba, nke onye ọchịchị ya baworo n’ime obi ndi ọ na-achị. Onye a ana-ekwu maka ya bụ Ifeanyị Ugwuanyị abụrụlarị onye eji maka ileba anya n’ebe ihe ndi agbarapụrụ agbarapụ were mara.
N’ime afọ atọ gara aga, Ugwuanyị emefuela akatamkpo ego ruru njeri naira iri anọ na ise iji dozie ọtụtụ okporo ụzọ nke ruchara naarị kilomita atọ n’ime steeti Enugwu.
Nke a na-egosi ezi ọchịchị nakwa ibu ọdị mma ndi ana-achị achị n’obi, tinyekwara igba mbọ imeputa ebum n’obi ndi mere ka enweta steeti Enugwu.
Aga-eto Ugwuanyị maka mbọ ọ gbara idozi ụzọ Milịkịn, n’ihi na nke a na-egosi ibu ọdị mma nakwa nchekwa ndụ ndi ọ na-achị n’obi.
Aka ọrụ Ugwuanyị abụrụla echefu echefu na steeti Enugwu. Aga-echeta ya mgbe dum maka ime ebum n’obi ndi ọ na-achị tinyekwara nke ndi cheputara echiche maka irụ Enugwu nakwa maka ibu ọdị mma ndi mmadụ n’obi.
Ọbụghị ihe ịtụ n’anya, mgbe ndi mmadụ malitere na-amali enu dịka ụmụ atụrụ nwere onye nche mgbe emepere yabụ ụzọ Milịkịn ka edozichara ya n’isi nso a.
Mgbe anọrọ na mgbada ugwu ahụ n’akụkụ Iva Vali, nke dịdebere ahịa ọhụrụ ndi Enugwu mepe yabụ ụzọ, ọtụtụ ụmụ mmadụ bịara ma gosikwa añụrị ha. Ndi bịara mmemme mmepo a gụnyere ndi eze omenala, ndi isi okpukpere uka dị iche iche, ndi ahịa, ndi ọrụ ụgbọ-ala, ndi ọkada, ndi keke nakwa ndi ọzọ ihe ọma na-adị mma…
N’okwu ya na mmemme ahụ, Ugwuanyi bụ onye juputara n’ọñụ n’ihi igwe mmadụ bịara mmemme ahụ sịrị na ọrụ a bụ nke na-egosi ọtụtụ ihe ọma nke steeti Enugwu bụ obodo eji Kolsiti mara.
Ọ sịrị na onweghị ụzọ ọzọ dị na steeti Enugwu ga-enye ndi njem ihe nkiri obi ụtọ ka nke ụzọ Milikịn.
Ugwuanyị yọrọ ndi ọkwọ ụgbọ-ala ka ha were nwayọọ mgbe ha ga na-akwọ ụgbọ ha n’ụzọ ahụ ka ha were gaa n’udo ma nwekwa ezigbo ohere ikiri aka ọrụ ọma Chukwu rụrụ n’ụzọ ahụ.
Otu nnukwu ihe edere ma kwụba n’ụzọ ahụ tochara Ifeanyị Ugwuanyị ma kwue “n’ezie, n’ezie, steeti Enugwu dị n’aka Chukwu.
Previous Post: EBEE KA MGBANWE GA ESI BỊARA ỤMỤ NAIJIRIA?
Next Post: EWU